Indlela yokwenza imveliso yakho enye ye-TOP isesha kwi-Amazon?
Ngaba uye wakha wazibuza ukuba zeziphi izinto ezintathu eziphambili ezichaphazela ama-Amazon akho? Kukho ukubaluleka, izinga lokuguqulwa, kunye negunya lemveliso. Eli nqaku lizinikele kwiindlela zokuphucula ezi zinto ziphambili. Siza kuxubusha indlela yokwandisa ukubaluleka kwiphepha lemveliso, indlela yokuphakamisa izinga lokuguqulwa kweemveliso zakho ze-Amazon kunye nendlela yokuphucula igunya lakho.
Izindlela zokwenza imveliso yakho i-TOP ikhangele kwi-Amazon
Ukwandisa ukufaneleka kwekhasi lomkhiqizo
uzama ukubonelela ngezona ziphumo ezifanelekileyo kwiimfuno zabo zophando. Ngenye yezinto ezibalulekileyo ezichaphazela ukubeka uluhlu lwakho kwi-Amazon SERP. Yingakho kufuneka uhlawule ngokugqithiseleyo ukubeka uluhlu lwakho lokucwangcisa, ngokuqwalasela oku kulandelayo:
Isihloko yinto yokuqala yokuhlola i-Amazon kwiphepha lemiphumo yokukhangela. Mhlawumbi uye wabona iziqu ezide kwaye ezingafundiwe kwi-Amazon eneenkcukacha ezininzi zeemveliso kunye neempawu. Yikholwa okanye akunjalo, izihloko ezinjalo ziphakamileyo kwi-Amazon kunamaxwebhu amancinci kunye nezichanekileyo. Apha kufuneka unakekele ngakumbi ngendlela i-Amazon eya kwamkela ngayo isihloko sakho kunokuba abathengi bakho banokukwenza. Unokuzalisa isihloko sakho ngegama elininzi njengoko ufuna, kwaye ngakumbi, bhetele. Ngokwenza njalo, uya kwenza ukuba isihloko sakho sichaze kwaye sitshitshise abaqhubi be-Amazon kunye nabaphandi.
Eli candelo lilungiselela ukubonelela abathengi ngazo zonke iinkcukacha ezikhoyo malunga nomveliso. Kufuneka uzalise onke amanqaku achazayo ukuba uphendule yonke imibuzo enokwenzeka ukuba abathengi bakho banokubuza. Ngaphezu koko, kunengqiqo ukongeza amagama akwizinto ezijoliswe kuyo.
Inkcazo yemveliso yinto ebizwa ngokuba yongezwa komsebenzi okhankanywe ngaphambili. Ukufumana inkcazo yakho yemveliso kunye nemigqaliselo yokucinga. umgaqo, abasebenzisi banqwenela ukuchofoza kwiziphumo zokukhangela amagama ngokuphindaphindiweyo kunokuba bathengise ngabathengisi ngabanye. Kongeza, gcinani engqondweni ukuba abanye abasebenzisi bafuna iimveliso ezikhankanyiweyo ezithile ngenombolo yomenzi. Ukuze ugweme ukulahlekelwa ngumthengi wakho, unokufuna ukongeza le
Iinkcukacha zenye iindawo ezibalulekileyo ze-Amazon. , fi, ubukhulu, ubunzima, umbala, umhla wokuvelisa, iinkcukacha zobugcisa, njl njl.
Iiklasi kunye namacandel
Iziphumo zophando ze-Amazon zihanjiswa ngokwecandelo lohlu. Yingakho kufuneka udibanise imveliso yakho kwiindidi ezifanelekileyo kunye namacandelwana. Kuza kuphakamisa amathuba akho ukuba abonakale kubathengi bakho abanakho kwaye ukhulise ukuthengisa kwakho.
I-Amazon inikezela abathengisi be-intanethi ubuncinane ubuncinane kwiimfuno zekota zokufuna. Kufuneka uzuze kumnye wabo, unomdla apho akho amagama afanelekileyo kwaye ajoliswe kuwo. Nangona kunjalo, kufuneka uphephe iimpazamo ezilandelayo - amagama aphindayo, iziqhagamshelo, okanye ukuchonga okunye.